DF oo shaacisay qorshe dib loogu soo celinayo qaar ka mid ah safaaradaha Somalia | Xaysimo
Home War DF oo shaacisay qorshe dib loogu soo celinayo qaar ka mid ah...
DF oo shaacisay qorshe dib loogu soo celinayo qaar ka mid ah safaaradaha Somalia
Dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshayaal ay sheegtay in ay dib ugu soo celinayso Safaaradihii Dawladda Soomaaliya ku lahayd dalal badan oo caalamka ka tirsan .
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dawladda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Dawladda Federaalku ay wado qorsheyaal dib loogu soo celinayo dalal badan oo ka tirsan dalalka Caalamka, Safaaradihii ay Soomaaliya ku lahayd.
Axmed Ciise Caawad Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibada ee Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay soo celinayso sumcaddii ay ku lahayd Soomaaliya dalalka caalamka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in ay horseedi doonto sii adkeynta xiriirka Dawladdaha Caalamka kala dhexeeya Soomaaliya.
Arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu magaalada New York ee dalka Mareykanka uu dib xariga uga jaray Safaaraddii Soomaaliya ee dalka Mareykanka .
Cawad ayaa sidoo kale ka hadlay in 30 sano kadib dowladda Mareykanka ay dib u furtay safaaradii ay ku laheyd Muqdisho, waxaana uu sharaxay muhiimada ay Soomaaliya u leedahay furitaankii safaarada Mareykanka uu ku lahaa Muqdisho.